> Resource> Samsung> Nyefee Music si iPod ka Samsung Galaxy
M upgrading ekwentị m, m na-eche m na-aga na-galaxy S2 tụnyere ndị iPhone 4. Ma m nwere ihe iPod aka na m gwara nwanne m nwoke na ọ bụrụ na m ga-esi a ọhụrụ ekwentị, m ga-enye ya m iPod. Ma m nwere n'ezie egwu songs na iPod na m na-eche ma m nwere ike nyefee m iPod songs n'elu galaxy S2.
Na narị songs na iPod, i nwere ike ike na-eche nyefee ha ọhụrụ gị Samsung Galaxy, na-ekwu Galaxy S3. Ọ bụrụ na niile songs na-zụrụ si iTunes Library, i nwere ike imeghe iTunes nchekwa na kọmputa gị ma detuo songs ọhụrụ gị Galaxy S3. Gịnị ma ọ bụrụ na songs na iPod na-jidere ndị ọzọ na ọwa? Na nke a, i kwesịrị a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ maka enyemaka. Ebe a, m ukwuu nwere ike ikwu na ị na-agbalị Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Ọ bụ a pụrụ iche otu-click ekwentị transfer ngwá ọrụ, nke na-enyere ị nyefee niile songs na listi ọkpụkpọ site na iPod ka Samsung Galaxy na efu data ọnwụ.
Otú nyefee Music si iPod ka Samsung Galaxy
Download ngwá ọrụ nyefee iPod music ka Samsung Galaxy. Mgbe ahụ, iṅomi mfe nkuzi banyere otú idetuo music si iPod ka Samsung Galaxy na Windows version. Mac ọrụ nwere ike na-yiri nkuzi.
Nzọụkwụ 1. Run MobileTrans na PC
Na mbụ, wụnye na-agba ọsọ a 1-click ekwentị transfer ngwá ọrụ na PC. Mgbe ahụ, bụ isi windo na-egosi dị ka screenshot-egosi n'okpuru.
Cheta na: The ekwentị transfer ngwá ọrụ - Wondershare MobileTrans n'ụzọ zuru ezu na-akwado iPod zọsara na-agba ọsọ iOS 5/6/7/8 na ọhụrụ iOS 9, na Samsung Galaxy ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ iPod na Samsung Galaxy ka PC
Mgbe ahụ, jikọọ ma nke iPod na Samsung Galaxy, dị ka Samsung Galaxy S3 ka PC. MobileTrans Ga ngwa ngwa ịchọpụta ha. Mgbe ahụ, iPod na Samsung Galaxy ga-emere na odude iche iche ke akpan window. N'etiti ha bụ "tụgharịa" button. Pịa ya, na n'ebe ha ga-agbanwe ibe.
Mgbe i bu n'obi na hichapụ ihe niile nke ugbu a songs na gị Samsung Galaxy na-eme ka ụlọ maka ndị si iPod, ị dị nnọọ mkpa nne Mmetụta kwụsịrị "Clear data tupu oyiri" taabụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na-abụ ndị, ka taabụ naanị ya.
Nzọụkwụ 3. Nyefee Music si iPod ka Galaxy
N'ezie, MobileTrans-enye gị ohere nyefee music, kalenda, photos, videos, iMessage, kọntaktsị na iPod ka Samsung Galaxy. Iji nyefee music, ị ga naanị na-music enyocha. Mgbe ahụ, na-amalite music transfer site na ịpị "Malite Copy". Mgbe nyefe-abịa na njedebe, pịa "OK".
Ndị na-esonụ video bụ banyere ebufe music si iPod ka Galaxy
Gbalịa MobileTrans nyefee music si iPod ka Samsung Galaxy, dị ka S3.
Olee otú Idozi Smartphone Battery Nsogbu Iji The Samsung Battery Manager
Akwado Video Formats N'ihi Samsung Galaxy S4, S3 Ma S2